Ciidamada difaaca dalka oo lagu eedeyay inaysan dhaqangelin amar lagu mamnuucayo dhuxusha laga soo dhoofiyo soomaliya – The Voice of Northeastern Kenya
Ciidamada difaaca dalka oo lagu eedeyay inaysan dhaqangelin amar lagu mamnuucayo dhuxusha laga soo dhoofiyo soomaliya
Star FM November 13, 2017
Kormeerayaal ka tirsan qaramada midoobay oo warbixin hor leh soo saaray ayaa ciidamada difaacada dalka ee loo yaqaano KDF-ta ee ku sugan gudaha soomaliya ku eedeyay inay ka gaabiyeen in la dhaqangeliyo amar lagu mamnuucay dhoofinta dhuxusha ee ay ku howlanyihiin xarakada Al-shabaab.
Warbixinta ayaa lagu sheegay in xarakada Al-Shabaab sanad kasta ugu yaraan 10 milyan oo doolar oo u dhiganta hal bilyan oo shilin ay ka soo gasho dhuxusha laga soo dhofiyo dekadaha ku yaalo koonfurta soomaaliya oo ay ka howlgalaan KDF-ta qeyb ka ah AMISOM.
Sido kale warbixinta ayaa waxaa qeyb ka ah in Amisom aysan dowlada soomaaliya ka caawin in la dhaqangeliyo amarkaasi ama sarakiisha dabagalka sameynaya loo fududeeyo inay tagaan dekadaha Kismayu iyo Buur Gaab.
Warbixintan ayaa lagu xusay in talaabadii uu golaha amaanka ee qaramada midoobay ku mamnuucay dhoofinta dhuxusha oo anan si buuxda loo hirgelinin ay caqabad ku tahay la dagaalanka iyo howlagalada ka dhanka ah xarakada Al-shabaab.
Sido kale kormerayaasha ayaa sheegay in ganacsigaasi uu yahay mid dagaalyanaahada u suuragelinayo inay maalgeliyaan howlahooda.
Sanadii la soo dhafay ayay ahayd markii qaramada midoobay qeybteeda soomaaliya iyo kormeerayaasha Eritriya ay shegeen in ciidamada difaaca dalka ay 2 doolar ku leeyihiin jawaan kasta oo dhuxul ah oo si sharci darro ah looga soo dhoofiyo Kismayo.
Ciidamada difaaca dalka ayaanan weli ka hadlin eedeymaha loo soo jeediyay.
← Ugu yaraan 10,000 oo qof oo ku barakacay daadad saameeyay magaalada Thika
34 qof oo ku dhimatay shil ka dhacay Kongo →